[Ukara] Wondershare 1-Click PC Care - PC Care Software
Gbalịa Ọ Free N'ihi Windows 7 / Vista / XP (32 bit & 64 bit) Zuru ugbu a
N'ụzọ dị ịrịba ama ọsọ Up Your PC & Network
Adị n'elu gị na PC na netwọk site gwara mbipụta nile na-akwụsịlata gị na kọmputa na internet site ezi-na-n'iji ya gee ntị gị usoro ntọala elu arụmọrụ.
- Hichaa ndekọ faịlụ, wepụ ndekọ redundancy na ndozi ndekọ nsogbu.
- Hazi ma belata mmalite oge, mata na ọcha zoro ezo ma ọ bụ na-enweghị isi omume na Windows mmalite.
- Idozi mbipụta nile selata kọmputa gị.
- Ebuli na speedup gị internet ọsọ.
N'otu ntabi Idozi Computer Njehie
1-Click PC Care Rụrụ dị ka a usoro dọkịta na-eme gị na kọmputa na-agba ọsọ ike, mụ na ngwa ngwa site gwara ma na-eburu usoro free si njehie.
- Deep ike iṅomi ka ego gị Windows usoro ahụ ike.
- Akpaghị aka ịchọpụta na n'ịwa a zuru ezu nchọpụta nsogbu akụkọ nke nwere ihe ize ndụ.
- Safely idozi kọmputa njehie dị ka gwara wdg faịlụ njehie, ma ọ bụ Windows ndekọ njehie mee ka gị na Windows usoro kwụsie ike karị.
- Ozugbo idozi PC njehie.
Chebe gị Internet Security & Nzuzo
- Clean nchọgharị akụkọ ihe mere nke ngalaba nchọgharị dị ka ntụgharị na Firefox. Ahụ na-agụnye kuki, AutoComplete ụdị akụkọ ihe mere eme, na nso nso mesịa URLs, Nwa Oge Internet faịlụ.
- Clean kuki mmalite oge, mata ma hichaa zoro ezo ma ọ bụ na-enweghị isi omume na Windows mmalite.
- Hichaa Windows akụkọ ihe mere eme na-agụnye na-adịbeghị anya na kọmputa na-eme, na ime metụtara nke Windows usoro dị ka clipboard, Windows & System nwa oge faịlụ, Memory dumps, wdg,.
- Mechie elu backdoor na ike ga-hijacked site virus, Trojan, na spyware.
Get ọmụma zuru ezu na gị PC Ọnọdụ
Ego na-egosipụta na kọmputa gị ngwaike ọmụma na nhazi.
Lelee gị usoro ịrụ ọrụ dị ka nke ọma dị ka ihe niile ngwaike na netwọk ntọala.
PC Kwụsie Analysis
Ego kọmputa gị kwụsie ike site ịgụ isiokwu Windows maka ihe ọ bụla ndekọ na ngwa njehie.
PC Security Analysis & rụkwaa
Ego na idozi mbipụta nke nwere ike iyi egwu na kọmputa gị nche.
Ọcha-enweghị isi na-abaghị uru ndekọ Ndenye na kọmputa gị.
Ọcha ọrụ metụtara nke diski ike onwe data.
Ọcha Windows na internet ọrụ egwu na kọmputa ọrụ metụtara.
Ratụ ratụ File Cleaner
Iṅomi ma ọcha ahụ junk faịlụ na kọmputa gị ka gị PC agba ngwa ngwa.
Ọcha ghara ịdị irè mkpirisi ka ihe kwa ụbọchị na nke na kọmputa gị ngwa ngwa na ndị ọzọ ga-adaba adaba.
Ejighị n'aka Esemokwu Remover
Wepụ kọmputa gị ejighị n'aka egwu na-abụghị ala metụtara.
Wepụ mmapụta, spyware na-achọghị na ngwa iji hụ na nchekwa.
Akpaghị aka ịgbanwe netwọk gị ntọala na jirichaa netwọk ọsọ.
Ebuli gị usoro ntọala na-adị n'elu gị na kọmputa.
Ebuli usoro ọrụ ma hapụ ndị ọzọ ego maka Windows na software-agba ọsọ.
Iṅomi ma idozi gị Windows usoro njehie, chebe gị usoro si mkpọka, freezes na '-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo' nsogbu.
Ịmepụta ndabere maka ihe niile mgbanwe TuneUp360 mere na kọmputa gị maka ihe ọ bụla o kwere omume mweghachi.